မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Honeymoon to New Zealand: Day2- Paihia(Bay of Islands)> A visit to Russell
Posted by mabaydar at 12:59 AM
လှပတဲ့ရှုခင်းလေးတွေ မျှဝေခံစားခွင့် ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ.. အပန်းဖြေအိမ်ဝယ်ပြီးရင်လည်း လက်တို့ပါဦးနော်..
6/29/2015 10:41 AM
စောင့်ဖတ်ရတာ အမော ခုမှပဲအမောပြေတယ်။ သွားလည်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ အဲခါကျ အလွတ်လာကျက်မယ် ဟိ။ ဟုတ်ပ အဲ Caravan နဲ့လျှောက်သွားချင်တယ်။ ဟိုတလောကပဲ အလုပ်တူတူလုပ်တဲ့ Queensland က တစ်ယောက် သူ့ ရည်းစားနဲ့ ဒီကနေPerth ကိုအဲကားနဲ့ပဲ မောင်းသွားကျတယ်.အေးအေးဆေးဆေးပဲ တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာတယ်ပြောတယ်။
6/29/2015 2:44 PM
ရှူခင်းတွေ တဝကြီး ကြည့်သွားတယ်
6/29/2015 4:01 PM
ရှုခင်းတွေကြည့်ရုံနဲ့ လန်းဆန်းအေးမြခြင်းကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ တနင်္လာနေ့ ပျင်းရိစွာနဲ့ရုံးကိုလာပြီး ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်တော့ မဗေဒါရဲ့ ပိုစ့်လေးဖတ်လိုက်ပြီး လူက လန်းဆန်းသွားတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ပိုစ့်လေးလဲမြန်မြန်တင်ပါနော်။
6/29/2015 4:40 PM
@TZN - ပိုစ့်တင်တင်ပြီးချင်း ဖေ့ဘွတ်page မှာတောင် မရှယ်ခင် လာပြီး အားပေးသွားတဲ့အတွက် အတိုင်းထက် အလွန် ပျော်မိသလို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မနက်က TZN ကွန်မန့်ကြောင့် တမနက်လုံး စိတ်ကြည်လင်ပြီး ပြုံးနေမိတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒါနဲ့ TZN က facebook page ရော like ထားလားဟင်?
@Yumm - တော်တော်ကြာမှ တင်မိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ SEA Game ဘောပွဲရယ် နောက်ပိုင်း အလုပ်ရှုပ်တာရယ်နဲ့ မရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတယ်။ Yumm အလွတ်ကျက်မယ်ဆိုမှ... ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ခရီးသွားပိုစ့် ပေါင်းချုပ် စာအုပ်လေးလုပ်ပြီး readers တွေ လက်ဆောင်ပေးချင်တာ။ ဟီး။ အင်း အိမ်ကားနဲ့က သွားချင်တဲ့ နေရာသွားလို့ရပေမဲ့ သူ့ဟာနဲ့သူ Drawback တွေ ရှိတာတွေလဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မလုပ်ဖူးတော့ စွန့်စားခန်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ လုပ်ချင်တယ်။
@Anonymous - ကျေးဇူး။ ဓာတ်ပုံတွေက ကားပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ။ မြင်းတွေ နွားတွေနား သွားရိုက်ချင်တာ ကားက မရပ်တော့လဲ ဖြတ်သွားတုန်း အမှီပဲ။ လှတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
@မိုးဦးစံပယ် - ညီမရေ။ ခုလို လာပြီး ပြောပြသွားတာ ကျေးဇူးပါ။ ရေးရတာလဲ အားရှိတယ်။ မြန်မြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်နော်။
6/29/2015 10:58 PM
အရမ်းအရမ်းကို စိတ်ကြည်နူးစရာလေး Russell မြို့လေး ကြိုက်လိုက်တာဟယ် အခုတလော မြို့ပြကနေ ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်နေတယ် အဲလိုနေရာမျိုးလေးမှာ တစ်ပါတ်ဆယ်ရက်အမုန်းကိုနေပလိုက်ချင်နေပြီ ဇွန်ဘီမြို့မှာ ထိုင်ပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ကို အဲ့လူမရှိတဲ့လမ်းနဲ့အိမ်တွေနဲ့ကို တနေကုန်ထိုင်ကြည့်နေလိုက်ချင်တာ ဟွင်းးး 2014 က ဆွီဒင်က Gothernburg ကိုသွားတုန်းက မဗေဒါတွေးသလိုပဲ အိမ်လေးတွေလှလွန်းလို့ ဟောလီးဒေးဟုမ်းမ်လိုချင်ခဲ့ဖူးတယ် အဲ့မှာလဲ လူအရမ်းနည်းတယ် လူတွေကလဲ တော်တော်သဘောကောင်းကြတယ် ပြန်သွားမယ် နှစ်မကုန်ခင် ပြီးတော့ ဝိုင်းလက်ထပ်ပြီးကာစက Isle of whight ဆိုတဲ့ ကျွန်းမြို့လေးကိုသွားဖူးတယ် နေရာတွေတခုနဲ့တခုဝေးပြီး ထိုင်ငေးနေချင်စရာပဲကောင်းတယ် လာလည်ကြပါလားအေ
တိုးဘတ်စ်တွေအကြောင်းသေချာလေးရေးပြတာ ကျေးဇူးပဲ အဲလိုနာရီနဲ့ဝယ်စီးဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းသားနော် တခါမှမကြားဖူးဘူး ဒါဝတ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကလဲ အထုပ်တွေမရောက်ခင် ဒါလေးတွေပဲဝတ်နေရပေမယ့် ချစ်စရာလေးတွေဟယ် လူတွေ ဟန်းနီးမွန်းမှာလှကိုလှတယ် ပျော်နေလို့လားမသိဘူးနော် ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချတဲ့ မဗေဒါနဲ့ ချစ်ချစ်ကိုတော့ သဘောကျပြီးကျရင်းပဲ အစာတစ်ခုကိုမပြောင်းမလဲစားတဲ့ အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေနေရှာတဲ့ Mr.Right ကိုလဲ လေးစားပြီးရင်းလေးစားလျက်
6/30/2015 4:23 AM
မဗေဒါရယ်... ပိုစ့်လေးတွေမျှော်နေတယ်နော်.. ဒီပိုစ့်ဖတ်ရတာမ၀ဘူး...အဆုံးထိကိုဖတ်ပစ်ချင်ပြီ...း)
စာဖတ်သူတွေကို ပေးတည်းမယ်ဆိုတာတော့ သဘောကျတယ်..ခစ်ခစ်...အိမ်ဝယ်ရင်ပြော လာလည်မယ်နော်..။
6/30/2015 11:37 AM
ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာလေးကို ပြောခွင့်ရပြီး မဗေဒါ ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတော့ ထပ်တူပျော်ရပါတယ် .. Facebook page တော့ Like မထားရသေးပါဘူး..ပျော်ရွှင်စရာ နေ့သစ်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
7/01/2015 9:08 AM
@Wine - ၀ိုင်းက လူရှင်းပြီး တိတ်ဆိတ်တာကို ကြိုက်တာလား? မဗေဒါကတော့ လူအရမ်းကြီးရှုတ်တာမကြိုက်ပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ မရှိပဲ ရှင်းနေရင်လဲ ပျင်းမှာသေချာတယ်။ ဟိ... ၀ိုင်းတို့ အနောက်တိုင်းဘက် လာလည်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ ဥရောပခရီးကို သူများတွေသွားသလို ၁ပတ် ၁၀ရက်လောက်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံး တိုးနဲ့ ပက်စိတ်တိုက် သွားတာမျိုး မလုပ်ချင်ဘူး။ ရောက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အထိုက်အလျောက်အေးဆေး explore ချင်တာ။ အဲလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရှေ့တိုင်းမှာနေတဲ့ သူအတွက်က အချိန်ရော ပိုက်ဆံရောစကားပြောတယ်။ အလုပ်ကလဲ ခွင့်ရအုံးမှ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ချပါ။ လာဖို့ တကယ်စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ Isle of whight ကတော့ ခု ၀ိုင်းပြောမှ google လိုက်တာ တော်တော်လှတယ်။ နောက်လာမယ်ဆိုမှပဲ ဘယ်တွေလည်ချင်လဲ အသေးစိတ် Google ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။ အနောက်တိုင်းမှာ နေနေတုန်း အဲ့ဒိဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကို လည်သာလည်ထား။
@ဆုမြတ်မိုး - မဗေဒါလဲ အမြန်ရေးချင်ပါတယ်။ ခုတစ်လောမှ အလုပ်က တစ်ယောက်က အလုပ်ထွက်သွားတော့ ၂ယောက်စာလုပ်ပြီး အလုပ်တွေ လက်မလည်ဖြစ်နေလို့။ အလုပ်မှာ ဘလော့ရေးတဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပြီး အိမ်က ကိုရီးယားကားကြည့်တဲ့ အချိန်ထဲက ဖဲ့ပေးပြီး ဘလော့ရေးဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ကြိုးစားရမယ်။ မရေးတာ နည်းနည်းပျက်သွားတာနဲ့ ပုံမှန် စာဖတ်သူတွေလျော့သွားတာတွေ့ရတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖြစ်ရင် တကယ်လာမှာ သေချာလား?
@TZN - အရင်ကလဲ ကွန်မန့်တွေ တွေ့လို့ မဗေဒါဘလော့ကို ပုံမှန် ဖတ်တဲ့သူဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဒီမှာ ပုံမှန်ဖတ်သူတော်တော်များများက ဖေ့ဘွတ် page ကို like ထားပြီး အဲ့မှာ update လုပ်မှသာ ဒီကို လာကြတာလေ။ အာ့ကြောင့် မေးကြည့်တာ။ ခုလို မှတ်မှတ်ရရ ကိုယ့်ဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲ။ ဒါနဲ့ မဗေဒါရဲ့ အပြင် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်? :P
7/02/2015 10:35 AM